Golaha Shacabka oo mooshin kaga jawaabaya mooshinka badda ee baarlamaanka Kenya – Kalfadhi
Qaar ka mid ah xildhibaannada Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku howlan mooshin ka dhan ah farogelinta Kenya. Mooshinka ayay xildhibaanadu qorsheynayaan inay gudbiyaan kolka la furo fadhiga Golaha Shacabka dhammaadka bisha soo socota ee September. Xubno ka tirsan Golaha Shacabka ayaa KALFADHI u sheegay in mooshinka lagu xoojin doono muranka badda ee Soomaaliya kala dhaxeeya Kenya.
Maxamed Cumar Dalxa ayaa KALFADHI u sheegay in tiro xildhibaanno ah oo uusan sheegin magacyadooda oo ku sugan dalka inay saxiixeen mooshinka. Xildhibaanka ayaa u jeedka mooshinkan ku sheegay mid jawaab u ah mooshin ay wadaan Baarlamaanka Kenya oo lagu dalbaday in badda Soomaaliya loo adeegsado cudud milatari.
“Baarlamaanka Kenya waxaa u joogo Baarlamaanka Soomaaliya, madaxda qarankana Howshooda ha qabsadaan,” ayuu yiri Xildhibaan Dalxa. Dalxa ayaa weerar afka ah ku qaaday masuuliyiin Soomaali ah balse heysta dhalashada Kenya kuwaas oo marar badan ka hadlay muranka badda ee labada wadan. “Waxaan leeyahay Kenya noqda ama Soomaali noqda oo ilaaliya dhalashadiina.”
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegayay in mooshin ka dhan ah Kenya ay wadaan qaar ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ee ka caraysan faragalinta Kenya ee doorashooyinka Jubbaland iyo sheegashada Badda Soomaaliya.
Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa labaduba hada ku wada maqan fasaxyo waxayna si dhow ula socdaan xiisada Badda ee ka dhex taagan labada dal.
Abdi Asiz Realy, kalfadhi.
Xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble “Anagu waxaan rabnaa Gobolka Banaadir inuu yeesho koonsal Dadku ay soodoortaan”